Macluumaadka Shirkadda - Jiangsu Three Sheep Garden Products Co., Ltd.
Waxaa la aasaasay 2014, Shenzhen Enimei Technology Development Co., Ltd. oo aad ugu heellan soo saarista qalabka quruxda badan, oo ku hawlan cilmi baarista & horumarinta, qaabeynta, soo saarista, suuqgeynta iyo iibinta aaladda quruxda adduunka oo idil. Waxaan bixinnaa badeecooyin fara badan oo gogo 'oo ay ku jiraan burushka nadiifinta wajiga, xoqeyaha maqaarka wajiga, sameeyaha maaskaro, burushka korontada lagu qurxiyo, fiiq-madow iyo wixii la mid ah.
Iyada oo waaxdayada farsamada & shaybaarka tijaabada ah, sidoo kale xirfad xirfadeed iyo khibradda wax soo saarka R & D, waxaan ku guuleysannay in ka badan 60 shatiyada farsamooyinka qurxinta iyo naqshadaha muuqaalka, Waa shirkad tiknoolajiyad sare ku leh magaalada Shenzhen. Waxaan ku leenahay xafiiska 300 mitir murabac ah iyo cabbirka warshada oo ka weyn 1400 mitir murabac ah. Iyadoo mabda 'caalami ah, casri ah, xirfad iyo wax ku ool ah, waxaan bixinaa hal adeegga masduulaagii ka R & D, soo saar ilaa iibka, iyo ka our u gaar ah in ay ODM & OEM.
Shirkaddayadu waxay aasaastay nidaam maamul iyada oo la raacayo heerarka caalamiga ah ee tayada: ISO 9001: 2015, waxayna dhaaftay shahaadada sheyga ee CCC, CE, ROHS, FCC, PSE iwm.
> Horumarinta Nooca ENIMEI: Horumarinta, kor u qaadida iyo iibinta quruxda iyo alaabada daryeelka shakhsiyadeed ee hoos yimaada sumadda lahaanshaha, PHILBABY, INAMEX, STAR BEAUTYFULL
> Amarada OEM / ODM / OBM: Bixi sumadaynta badeecad gaar ah iyo naqshad xirmo, adigoo ku daraya qiimaha badeecada asalka ah
> Hay'adda Sumadda Ruqsadda Ganacsi: Wakaaladda Sumcadda Ruqsadda Ganacsi ee noocyo gaar ah oo ka jira dalal gaar ah
Warshadeena u gaarka ah, keenista waqtiga, mar walbana waxaan ku soo rogeynaa shuruudo adag tayada wax soo saarka si aan ula kulanno dalabaadka iibsadayaasha. Qayb kasta oo badeecado ah, kormeer buuxa ayaa lagu fuliyay QC-yadayada ka hor rarka. Mid kasta oo ka mid ah jawaab celinta macaamiisha, waxaan si firfircoon ula socon doonaa una soo bandhigi doonaa xalalka ugu qancinta badan.
Si aan si wanaagsan ugu horumarino suuqeena, waxaan si firfircoon ugu dadaalnaa dalbashada noocyada kala duwan ee oggolaanshaha iyo calaamadaha alaabadayada ugu muhiimsan, si aan u qancino shuruudaha dalal kala duwan.
Intaa waxaa sii dheer, waxaan ku dhegannahay kaqeybgalka carwooyinka ganacsiga caalamiga ah si aan ula xiriirno macaamiisheenna si fool ka fool ah, oo aan sifiican isu garano. Waqtigan xaadirka ah, waxaan sidoo kale ku biirnay meheradaha ganacsiga ee caanka ah ee B2B oo waxaan si firfircoon ugu soo bandhignay kheyraadkeena khadka tooska ah, si aan dad badan uga ogaano wax badan oo nagu saabsan.
Waxaan si aad ah u sii kordheynaa xirfadeena iyo diiradaba. Waxaan had iyo jeer ahaan doonnaa, oo aan u heellannahay warshadaha qurxinta si aan u siino alaab ka wanaagsan iyo adeeg kaamil ah.